Files H.264 yihiin si ballaaran loo isticmaalo, iyo in ka badan la jaan qaada qalabka kala duwan sida waxyaabaha ay Apple. Sidoo kale waxaad ka heli doontaa in AVCHD waa uun qaab file in si gaar ah loogu talagalay HD kaamirada digital in uma lihin kombuyuutarrada gacanta ugu ah.
Ma leedahay files AVCHD qaar ka fiidiyo in aad rabto in aad si loogu badalo in ay files H.264 in ay ka sii socon? Tilmaan-bixiyahan waxa ku caawin doonaan inaad fahamto sida loo badalo AVCHD in H.264. Si loo joogteeyo video ah oo tayo sare leh oo ku dhameysan socodka ah ee diinta si guul ah, waxaad u baahan tahay fudud ah si ay u isticmaalaan oo deg deg ah video Converter.
Qeybta 1: Best AVCHD in Converter H.264
Qeybta 2: AVCHD Free in Converter H.264
Qeybta 3: AVCHD Online in Converter H.264
Wondershare Video Converter Ultimate waa Converter awood leh in aad u baahan tahay si loogu badalo AVCHD in files H.264.
Talaabada 1: Burcad software iyo dajiyaan file AVCHD video ah adigoo riixaya "Add Files" button. Hab kale oo ay ku darto files AVCHD galay Wondershare Video Converter Ultimate waa in jiidi-n-hoos u faylasha.
Tallaabada 2: U tag qaybta suuqa kala hoos-hoos loo magacaabay "Qaabka Output" oo ku yaalla dhinaca midigta ee suuqa kala barnaamijka. Dooro h.264 sida qaab wax soo saarka. Waxa kale oo aad ka heli doonaan fursad ay qabsato sifooyinka video aasaasiga ah sida heerka jir, xallinta, heerka yara iwm
Talaabada 3: Riix badhanka "Beddelaan" helay dhinaca hoose-saxda ah ee Wondershare Video Converter Ultimate interface software ah. Video files leh qaab AVCHD Your aanay u soo noqon doonaan si ay u qaab H.264 wax waqti ah gudahood.
Wondershare Free Video Converter waa lacag la'aan ah si ay u isticmaalaan software Converter video kara daaqadaha 8 OS. Waa aalad in loogu badalo karaa qaab video kasta in qaab kasta oo la jaan qaada qalabka oo dhan. Diinta ka sokow, Wondershare Free Video Converter daaqado siiyaan hawlaha tafatir sida beerista, falinjeeerka, biirtay, qoqobada ku daray watermarks iyo subtitles.
Taageerayaan Operating System: Windows NT4 // 2003/2000 / Vista / XP // daaqadaha 7 iyo Windows 8
Processor: 750MHz Intel oo kor ku xusan ama processor AMD
Free Hard Disk Space: In ka badan 100 MB
RAM ah oo ku saabsan 256 MB ama ka sare
Haddii kale kaliya isku day this Converter online si aad u hesho shaqo tan si dhakhso ah u sameeyey.
> Resource > Beddelaan > Sida loo Beddelaan AVCHD in H.264 Files